Sọftụwia maka njikwa eCommerce | ECommerce ozi ọma
Eziokwu nke ịmepụta ụlọ ahịa n'ịntanetị jikọtara na azụmahịa gị bụ usoro dị mfe ugbu a ị nwere ike ịme site na ngwanrọ eCommerce. N'oge ị nwere ụfọdụ ndụmọdụ nwere ike ịba uru maka ọdịmma gị, dịka Prestashop, Shopify, WooCommerce ma ọ bụ Magento. Site na ebe inwere ike ijikwa uzo ahia gi nke oma site ugbua gawa.
Kedu ihe ọ na - enye gị ohere ime site na sọftụwia ndị a? Ọfọn, n'ụzọ bụ isi, n'adabereghị ịmepụta ma jikwaa ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. Na mgbakwunye, ha na-akwado ọrụ nke ịchịkwa usoro ndị ahụ niile metụtara Ọrịre ịntanetị. Dịka ọmụmaatụ, na otu okwu nke nkwadebe na mgbasa nke katalọgụ ngwaahịa ndị anyị na-ere ahịa site na ụlọ ọrụ ndị a.
Mana oke ya na-aga n'ihu karịa n'ihi na ọ na-emetụtakwa akpaaka nke mbupu na ụdị mkpọsa ahịa niile. Ma site na usoro ọdịnala kachasị na site na netwọk mmekọrịta. Site na nkwado nke ga-abụ n'ọnọdụ dị mma, nghọta na ịdị mfe. Ruo isi na n'ikpeazụ ha ga-enyere gị aka ịzụlite iguzosi ike n'ihe na adọta ndị ahịa gị, na-akwalite ahịa ọhụrụ na ịbawanye ahịa.
1 Nchịkwa njikwa: ọrụ ya
2 Ihe aga-eme na azụmaahịa ọnlaịnụ
3 Mmemme raara nye ijikọta ọrụ
Nchịkwa njikwa: ọrụ ya
N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụ ngwa ahịa e-commerce dị ike nke na-enyere ụlọ ọrụ nwere njirimara ndị a aka ịre ngwaahịa, ọrụ ha ma ọ bụ ihe ha n'ụzọ dị irè karịa karịa na mbụ. Ebee, ndị a bụ ụfọdụ isi ọrụ nke sọftụwia njikwa maka ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa dị n'ịntanetị gosipụtara:
Ha nwedịrị ike iru kwado ihe nke mere na ndị ahịa nwere nkwado ka mma na ozi ha. N'ihi ya, mmekọrịta nke ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ ga-adị oke mmiri karịa ka ọ dị na mbụ.
Ọ bụ nkwado dị oke mkpa iji nweta ozi gbasara ngalaba ndị a kacha eleta na ihe dị mkpa, ịmara ngwaahịa ndị ndị ọrụ zụtara.
Uru ha bara ruru na sistemu kọmputa ndị a na-enye ngwaọrụ ndị dị mkpa iji clelee ụdị ịkwụ ụgwọ na mbupu dị iche iche site na webụsaịtị enyere site na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị.
Ihe aga-eme na azụmaahịa ọnlaịnụ
Ihe omume kọmputa ndị a bara ezigbo uru iji rụọ ọrụ ụfọdụ na njikwa nke ụlọ ọrụ ndị a. Site na ezigbo njikarịcha nke ọrụ ahụ, kamakwa site na ntinye nke ngwọta ndị ọzọ nwere ike ịbara uru maka ebumnuche ha. N'ihi na ihe dị na njedebe nke ụbọchị bụ na ahịa ndị a na-abawanye na nke a bụ otu n'ime ọrụ nke ngwanrọ maka ụlọ ọrụ n'ịntanetị. Dịka ọmụmaatụ, site na omume ndị a anyị ga-ewetara gị mgbe ozi a gasịrị:
Akụrụngwa ahụ na-enye gị ohere inye nkwado azụmahịa na ọrụ ndị dị mkpa maka njikwa azụmahịa azụmahịa gị:
Mmezi nke isiokwu: ebe ọ bụ enyemaka zuru oke iji kpughee nkọwa ya, ọnụahịa yana ọbụlagodi foto ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Na ngụkọta nzukọ a ụdị ozi dị ka kpọmkwem dị ka mkpa.
Mmezi nke ndị ahịa: a ga-egosipụta ụfọdụ data gị kachasị mkpa, dị ka iguzosi ike n'ihe ha, ụbọchị ndebanye aha ma ọ bụ omume na ịzụrụ ngwaahịa.
Nlekota na nhazi iwu: ebe inwere ike ihu uzo nile nke usoro ahia a di, site na nmalite ruo na njedebe. Dị ka ọ kwesịrị ịbụ ụlọ ahịa na-ewu ewu nke ahụ bụ nke a na-eduzi ngwaahịa a nke sayensị sayensị kachasị elu.
Nhazi usoro: ọ bụ akụkụ dị oke mkpa maka mmepe kwesịrị ekwesị nke azụmaahịa a ma ọ dabere na ihe dị mkpa dị ka njikwa azụmahịa. Ebe a na-atụle ihe ndị dị otú ahụ na azụmahịa azụmahịa n'ịntanetị, dị ka ịgba ụgwọ, ajụjụ ọnụ ma ọ bụ njikwa ịkwụ ụgwọ, n'etiti ụfọdụ kachasị dị mkpa.
N'ihe ngosi nke usoro niile: ọ bụ ngalaba nwere njikọ chiri anya na akụrụngwa nke weebụsaịtị yana na nke a na-enye data sitere na usoro njikwa na nrigbu niile nke ozi enyere site na ọwa a na nkwukọrịta. Ya mere, ọ dị mkpa, iji mee ka ndị ahịa dị ugbu a ma dọta ndị ọhụrụ. Ebe ihe omuma a di kwa ka emezu ego site na ulo ahia ma obu ahia.
Mmemme raara nye ijikọta ọrụ
﻿Enwere ụdị sọftụwia ọzọ nke na - enweghị ike ịdị na ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa dị n'ịntanetị, ọ bụkwa ya na - ahụ maka ijikọ ọrụ ndị kachasị mkpa na njikwa ya. Usoro nchịkwa e-Azụmaahịa a nwere ọtụtụ ngwọta iji gboo mkpa niile dị ugbu a maka ijikwa ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. N'ime ndị na-apụta, karịa ndị ọzọ, mmebe mmeghachi omume, intranet azụmaahịa, ọtụtụ asụsụ ma ọ bụ mmemme mmemme, n'etiti ụfọdụ kachasị mkpa. Mana n'aka nke ya, emepụtara njikọta maka ụkpụrụ ahịa dị ka nke ụlọ ọrụ ụfọdụ nyere na teknụzụ ọhụụ.
Ojiji nke mmemme ndị a na-eme na n'ikpeazụ ị nwere usoro ụfọdụ nke uru, dịka ndị anyị tụrụ n'okpuru:
Ọ na-edozi ọrụ niile n'ụzọ dị oke mma ma na-ebuli arụmọrụ niile na klas nke ụlọ ọrụ a.
Nchekwa ego enwere ike ịnweta na ị nweta ego ndị ọrụ mmadụ na nke ahụ nwere ike ịbụ nnukwu enyemaka maka ọdịmma nke ụlọ ọrụ dijitalụ ndị a.
Nwee, site na otu mmemme, ihe niile ịchọrọ maka ịgba ụgwọ, nchịkọta na pọtụfoliyo, ngwa ahịa ma ọ bụ nyocha ụlọ ọrụ.
Ngwa ngwa ị ga-amalite ọrụ ndị a yana na ọ nwere ike bulie arụmọrụ gị n'ọrụ ndị emere site ugbu a gawa.
N'ikpeazụ, ọtụtụ ohere iji gbasaa ọrụ ndị ahụ na-etinyeghị ihe ize ndụ dị egwu nke ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya n'ihe egwu. Site na ogo dị elu na mmemme akọwapụtara site na ụlọ ọrụ nke teknụzụ ọhụụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Sọftụwia maka njikwa nke eCommerce
Otu esi ahọrọ usoro ịkwụ ụgwọ maka ụlọ ahịa dị n'ịntanetị